December 2014 - မြန်မာစာတန်ထိုး ရုပ်ရှင်များ
အထွေအထူးတော့ မ်ိဆက်စရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ် အရှေ့မှာ ၁၊ ၂၊ ၃၊ တင်ပြီးသားပါ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး ဖိုင်ဆိုဒ်လဲ တက်နိုင်သလောက်ချပေးထားပါတယ်
ဇာတ်လမ်းတွေကို တစ်ကားချင်းစီကြည့်နေရတဲ့ ပျင်းနေတဲ့ Movieချစ်သူများအတွက် အရမ်းလဲမရှည်သလို အရမ်းလဲ မတိုတဲ့ TV seriesတစ်ခု တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းရဲ့ အစကတော့ စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျိုးမိုင်လာဟာ လူဆိုးဖမ်းရင် ထူးဆန်းတော့ မှော်သော့တစ်ချောင်းကို ရရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီမှော်သော့က တံခါးလက်ကိုင်ဘုရှိရုံနဲ့ ကြိုက်တဲ့နေရာကို သွားနိူင်တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ကံဆိုးဆိုးစွာနဲ့ပဲ သူ့ရဲ့သမီးက အဲဒီတံခါးသော့နဲ့ ဖွင့်ရင်း မိုတယ်တစ်ခုထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။သူ့ သမီးကို ပြန်ရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားရင် အဲဒီသော့လိုမျိုးပဲ မှော်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေတာကို သိလုပ်ရတဲ့အခါ သူ့သမီးကိုကယ်ဖို့ ဘယ်လိုတွေဆက်လုပ်မှာလဲ။အဲဒီမှော်ပစ္စည်းတွေကရော ဘယ်နေရာက လာတာလဲ။ အဲဒီမှော်ပစ္စည်းတွေကို လိုက်လံစုစောင်းနေတဲ့ အဖွဲ့တွေရဲ့ အန္တရယ်ကိုရယ်ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မှာလဲ။ သူ့ရဲ့ သမီးကိုရော ကယ်တယ်နိူင်ပါ့မှာလားဆိုတာတွေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်ရမဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။ကြာမြင့်ချိန် ၄နာရီပတ်ဝန်းကျင်ရှိတာမို့ Hobbit၊ Harry Potter ၊ The Lord of the ringတို့လို မှော်ဇာတ်လမ်းရှည်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် စိတ်ဝင်စားဖို့ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ မှော်ကား ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံသွားစေနိူင်မဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ IMDB Rating 8.4တောင်ရထားတယ်ဆိုကတည်းက ဒီထက်ပိုပြီး ညွန်းနေဖို့လိုအပ်မယ်မထင်တော့ပါဘူး အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေအောင် 318MB နဲ့ မကြည်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ် အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
ချစ်သူနှစ်ဦး ပျားရည်စမ်းခရီးအတူထွက်ခဲ့ကြတယ် ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု့ဟာ ပြောစရာ မလိုလောက်အောင် အထိကို ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ် ..
ယခင်က မိန်းကလေး နေခဲ့တဲ့ အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ကြတဲ့ညမှာပဲ ထူးဆန်းတဲ့ အလင်းရောင်တစ်ခု ထိုးကျလာတယ် ..
အဲ့အလင်းရောင်ဟာ ဘာဆိုတာ သူတို့ပထမပိုင်း မသိခဲ့ကြဘူး ..
အဲ့ဒီ့ညမှာပဲ တရေးနိုးတဲ့ အချိန် ဘေးနားက အသစ်စက်စက် ဇနီးချော ရုတ်တရက် ပျောက်ဆုံးမှု့ အတွက် သွေးရူးသွေးတန်း လိုက်ရှာခဲ့တဲ့အချိန်မှာ တောအုပ်အစပ်နားမှာ ကြောင်တောင်နဲ့ ကိုယ်လုံးတီး မတ်တတ်ရပ်နေတဲ့ ဇနီးကို တွေ့ပြီး ပြန်ခေါ်လာခဲ့တယ် .
နောက်မကြာခင်ရက်ပိုင်းမှာ ရေချိုးခန်းထဲမှာ မိမိရဲ့ လိင်အင်္ဂါသို့လက်နှိုက်ပြီး တီကောင်ကဲ့သို့ ကြီးမားတဲ့ ရှည်မျောမျော အကောင်တစ်ကောင်ကို ဆွဲထုတ်ခဲ့တယ် .
အဲ့ဒီ့အကောင်က ဘယ်ကနေ ရောက်လာတာလဲ .. ညပိုင်းမှာ ပေါ်လာတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အလင်းရောင်တန်းက ဘာလဲ .. အားလုံးဘဲအဆင်ပြေအောင် 220MB နဲ့ မဝါးအောင် တင်ပေးထားပါတယ်
အားလုံးဘဲ သိပြီးသားကားတွေမို့ မပြောတော့ပါဘူး Fast & Furious3ပါ ၁ နဲ့ ၂ ကိုတော့ အရင်ရက်တွေက တင်ပေးပြီးပါပြီ ခု ၃ ကို ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
ဒီကားလေး ပြန်တင်ပေးဖို့ တောင်ဆိုနေကြတာတော့ များနေပြီ ခု တင်ပေးလိုက်ပါပြီ ဖိုင်ဆိုဒ် 323 MB နဲ့ မဝါးအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ် အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ကြပါဦးဗျာ
အမေရိကန် အိမ်ဖြူတော်ကို ကိုရီးယား အကြမ်းဖတ်သမားတွေ ဝင်စီးတဲ့ ကားလေးပါ အိမ်ဖြူတော် တစ်ခုလုံး ကျရှုံးကုန်ပါတယ် ကဲ ပြန်ကြည့်ချင်သူများနဲ့ မကြည့်ရသေးသူများ အောက်မှာ ကြည့်နိုင်ပါပြီ
Monkey King 2014 ပြန်ကြည့်ချင်ပါတယ် ဆိုပြီး တောင်းဆိုထားတဲ့ သူတွေကတော့ တော်တော်များနေပြီ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါပြီဗျာ အားလုံးဘဲ ကျေနပ်နိုင်ကြမှာပါ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦး
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, သိုင်း, အက်ရှင်
မနေ့က ၁ တင်ပြီးသွားပါပြီ ဒီနေ့တော့ ၂ပေါ့ အထွေအထူး မိတ်ဆက်စရာတော့ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ် အားလုံးဘဲ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ အားလုံးဘဲ ဒေါင်းရတာ အဆင်ပြေအောင် 270MB နဲ့ ချုပ်တင်ပေးထားပါတယ် ကွန်ပျူတာမှာလဲ ဒေါင်းလို့ရသလို ဖုန်းနဲ့လဲ ဒေါင်းလို့ရပါတယ် မန်မိုရီနဲ့ APK သာရှိပါစေ ရစေရမယ် ကဲ အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါဦး
ဒီကားလေးကိုတော့ မိတ်ဆက်စရာမလိုတော့ပါဘူး အားလုံးဘဲ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေအောင် ဖိုင်ဆိုဒ်ချပေးထားပါတယ် 268 MB နဲ့ ကြည့်ရမှာပါ အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦးဗျာ
သေမှာကို မကြောက်တဲ့ လက်မရွံ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းပေါ့ ကြည့်ဖူးပြီးသားသူတွေ များမှာပါ မကြည့်ရသေးသူများနဲ့ ပြန်ကြည့်ချင်သူများအတွက်ပါ 248MB နဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ချုပ်ပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ကြည်လင်နေပါသေးတယ် အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါဦး
အဆိုတော်မင်းသားချော Justin Timberlake နဲ့ မင်းသမီး Amanda Seyfried တို့ပါဝင်ထားတဲ့
၂၁၆၉ခုနှစ်မှာ လူသားများသည် အသက်၂၅ နှစ်ပဲရှည်အောင် တီထွင်ခံရသောအခါ....
မွေးဖွားလာကတည်းက လက်မောင်းမှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နာရီပါလာသောအခါ...
ချမ်းသာတဲ့လူရယ် ဆင်းရဲတဲ့သူရယ် ခွဲခြားထားသော အချိန်များပြောင်းလဲမှု
Dayton နှင့် New Greenwich ဆိုတဲ့ အချိန်ဇုံ၂ခုကြား...
မင်းသား Justin Timberlake ကိုထည့်သွင်းလိုက်သောအခါ.....။
Connection မကောင်းသူများအတွက် Small File Size(278MB)ကိုပါတင်ဆက်ထားပါတယ်။
မူရင်းတင်သူ ကိုငြိမ်းစေရာအောင်ရဲ့ Adfly အတိုင်း တင်ပေးထားပါတယ်
မားစ်ဂြိုလ်မှာ လူစွမ်းကောင်းသွားလုပ်မယ့် လူသားကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ....
စွန့်စားခန်း၊သည်းထိပ်ရင်ဖိုခန်းတွေနဲ့ Walt Disney ရဲ့ လက်ရာမြောက် 3D Effect တွေကို
တစ်ဝကြီးကြည့်ရှုရမယ့်ဇာတ်ကားပါ..... အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေအောင် အရည်အသွေလဲ မကျအောင် 334MB နဲ့ ချုပ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖုန်းနဲ့လဲရပါတယ် ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီးမှ ပြောတာပါ APK နဲ့ မန်မိုရီသာရှိပါစေ
မိတ်ဆက်ပေးစရာတော့ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ် မနေ့က နံပါတ်၁ ကို တင်ထားပါတယ် ဒီနေ့တော့ ၂ ပေါ့ အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေအောင် ဖိုင်ဆိုဒ် 350 MB ကျော်လေးနဲ့ လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ကြည်ကြည်လေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ကြည့်ရမှာပါ ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ
Labels: ကာတွန်းကား, မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, ဟာသ, အက်ရှင်
အထွေးအထူး မိတ်ဆက်စရာတော့ မလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ် ကလေးတွေကော လူကြီးတွေပါ ကြိုက်တဲ့ ကားလေးပါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မိသားစုနဲ့ အပျင်းပြေပြန်ကြည့်သင့်တဲ့ကားလေးပါ လကမ္ဘာကို ခိုးဖို့အကြံကြီး ကြံတဲ့ ကားလေးပေါ့ မနက်ဖြန် Despicable Me2(2013) ထပ်တင်ပေးပါ့မယ် အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေရအောင် ဖိုင်ဆိုဒ်လဲ မသေးမကြီး 346MB နဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ် ကြည်ကြည်လင်လင် ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ပါဦးဗျာ
တော်တော်များများ လာရောက်တောင်းဆိုထားတာ တွေ့ရပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်တစ်မျိုးတည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကြည်ကြည်လေး ကြည့်ချင်သူများလဲအဆင်ပြေ ဖိုင်ဆိုဒ်နဲ့တာမှ လိုချင်သူများလဲအဆင်ပြေစေရန်အတွက် စကဆိုဒ်လေး လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် 377MB နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, သိုင်း, သဲထိတ်ရင်ဖို, ဟာသ, အက်ရှင်
Marvel ရဲ့နာမည်ကျော်ဇာတ်ကောင် Captain America ပထမဆုံးဇာတ်ကားပါ... အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေအောင် 450MB နဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်
Korea အဆိုတော်အဖွဲ့ Big Bang ထဲက T.O.P ပါဝင်ထားတဲ့ 2014 ထွက်ဇာတ်ကားလေးပါ
ဒီကားက 2006 ခုနှစ်ကထွက်ထားတဲ့ Tazza:The High Rollers ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပါတယ်..
ဇာတ်လမ်းကတော့ ကိုရီးယား မြေအောက်လောင်းကစားလောကထဲကို ရောက်သွားတဲ့
IMDb Rating (6.2/10) ရရှိထားတဲ့ Action ဇာတ်ကားပါ။
Connection မကောင်းသူများအတွက် Small File Size(306MB)ကိုပါတင်ဆက်ထားပါတယ်။
Director: Rapeepimol Chaiyasena ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး
13 September 2012 (Thailand) မှာ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ ထိုင်းသရဲကားဖြစ်ပါတယ်...
ဇတ်လမ်း ပုံစံကတော့ လက်ထပ်မယ် ပြောထားတဲ့ ချစ်သူက ကားမှောက်
သေပြီလို့ ကြားပြီး တိုက်ပေါ်က ခုန်ချသွားတဲ့ မိန်းမချောလေး....
မသေခင်က သူမ ကို ကျိတ်ကြွေနေတဲ့ ထမင်းဆိုင်က ကောင်လေးကတော့
ကောင်မလေး တိုက်ပေါ်က ခုန်ချ သေသွားပြီးနောက်မှာ
သူမ ရဲ့ အတွင်းခံ အ၀တ်ကို ခိုးယူထားတာ စိတ်မသန့်လို့ ပြန်သွားအထား
သေခါနီး ကင်ဆာ ရောဂါသယ် တစ်ယောက်ကလဲ ထိုအခန်းကို လာအငှား
မစားသင့်တဲ့ သေသူကို ပူဇော်တဲ့ အစား စားမိလို့ အသေဆိုးနဲ့ သေရပြန်...
ချစ်သူ ဆိုတဲ့ လူရဲ့ အလိမ်စကား ကို ပြောပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ မိန်းမလဲ
နောက်ဆုံး သူ လိမ်ညာမိလို့ သေသွားတဲ့ ကောင်မလေး အသုဘ ကို
ရောက်လာတွေ့တဲ့ ကောင်လေးလဲ နောက်နေ့ မနက် ကားပဲ မြင်ရပြီး
လူကတော့ ထူးဆန်းစွာ ပျောက်ဆုံးသွားပြန်တယ်....
Labels: မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, သရဲကား
IMDb Rating (6.7/10) ရရှိထားပါတယ်...
Connection မကောင်းသူများအတွက် Small File Size (329MB)ကိုပါတင်ဆက်ထားပါတယ်။
Labels: ပြိုင်ကားရုပ်ရှင်, မြန်မာစာတန်းထိုးရုပ်ရှင်, အက်ရှင်
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ညီလေး Nyiminn Thant ကတင်ဆက်ထားတာပါ။
The Chronicles of Narnia (3) : The Voyage of the Dawn Treader (2010)
ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သောအနေနဲ့ ကြော်ငြာပုံလေးများအား တချက်စီ ကလစ်ပြီး ကြည့်ပေးကြဖို့
ဒီဇာတ်ကားကတော့ Marvel ရဲ့ Super Hero တွေ စုစည်းထားတဲ့ Action | Adventure | Sci-Fi အမျိုးအစား ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး IMDb မှာ Ratings: 8.2 ရတဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကာပါ မကြည့်ရသေးတဲ့ သူများအတွက်ပါ
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ လိုမယ်ကို မထင်တာပါ.. Jackie Chan နဲ့ Chris Tucker တို့ရဲ့ Action | Comedy အမျိုးအစား ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ.. မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြည့်ရအောင် ကြည့်ပြီးသား သူငယ်ချင်းတွေလည်း မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ ထက်ကြည့်နိုင် မြန်မာစာတန်းထိုးနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
21 Jump Street ကို ကြည့်ဖူးသူတွေကတော့ 22 Jump Street ကို မျှော်နေမှာ သေချာတယ် ရယ်လဲရယ်ရသလို ကြည့်လို့လဲ ကောင်းလှပါတယ် စာတန်းထိုးပေးသူကတော့ ကိုမိုးကျော် ဖြစ်ပါတယ် ဖိုင်ဆိုဒ်ကိုတော့ တမျိုးတည်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုင်မကောင်းတဲ့သူတွေကော အစဉ်ပြေ လိုင်းကောင်းတဲ့သူတွေ အတွက်ကလဲ ကြည်ကြည်လေးဖြစ်အောင် ဖိုင်ဆိုဒ်ကို စကဆိုဒ် 389MB နဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ် လုံးဝကြည်လင်ပါတယ် ဒီလောက်ဆို ကြေနပ်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ် အောက်မှာဒေါင်းလိုက်ပါဦး သြော် pCloud က ဒေါင်းရခက်နေတယ်ပြောလို့ solidfiles ကနေ တင်ပေးထားပါတယ် ကွန်ပျူတာနဲ့ ဒေါင်းသမားများ Download ဆိုတဲ့စလုံးကြီးအောက်က Direct Download ဆိုတာကို နှိပ်ဒေါင်းပါ နောက် အပေါ်ကဟာကြီး နှိပ်ပြီး မရဘူး အော်နေဦးမယ်
ဂြိုလ်သားတွေနဲ့ ရေကြောင်းတိုက်ပွဲဝင်မယ့် Action ဇာတ်ကားပါ...
အဆိုတော် Rihana လဲအားဖြည့်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်...